अ’पराधको संरक्षण गर्ने न्यायाधीशमाथि महा’भियोग लगाऔं, ओलीलाई विदा गरौं : बाबुराम भट्टराई
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले देश गम्भीर संकटमा जान लागेको बताएका छन् । शुक्रबार ट्वीट गर्दै भट्टराईले देश गम्भीर संकटमा जाने उल्लेख गर्दै ५ बुँदे सुझाव पनि दिएका छन्। भट्टराईले अ’पराधलाई संरक्षण गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअ’भियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले जे’ल स’जाय कटौती गरिदिएपछि पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइराला रिहा भएको भोलिपल्टै डा. भट्टराईले न्यायाधीशमाथि महाअ’भियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका हुन् । साथै, उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विदा गरेर नेकपा भित्रैबाट अर्को व्यक्ति चयन गर्न पनि भनेका छन् ।
‘लोकतान्त्रिक ढंगले संकटमोचन गर्ने उपाय’ भन्दै डा. भट्टराईले संसद अधिवेशन बोलाउन, केपी ओलीलाई विदा गरेर नेकपाभित्रैबाट नयाँ चयन गर्न र अ’पराधको संरक्षण गर्ने न्यायाधीशलाई महाअ’भियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका छन् । साथै, उनले भ्र’ष्टाचार रोक्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्न र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जान पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।